Mpanamboatra ve ianao sa orinasa mpivarotra?
Izahay dia tena mpanamboatra, zaili construction machinery Co., Ltd.dia niorina tamin'ny taona 2012.
Afaka mamokatra ny breakers araka ny mpanjifa 'design?
Eny, misy serivisy OEM / ODM.Izahay dia mpanamboatra matihanina mandritra ny 15 taona any Shina.
Inona ny MOQ sy ny fepetra fandoavam-bola?
MOQ dia 1 set.Ny fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny T / T, L / C, Western Union dia ekena, ny fepetra hafa dia azo ifampiraharahana.
Ahoana ny amin'ny fotoana fanaterana?
7-10 andro fiasana mifanohitra amin'ny habetsahan'ny baiko
Momba ny serivisy aorian'ny varotra
14 volana fiantohana ho an'ny hydraulic breakers manohitra ny volavolan-daty.24 ora haingana aorian'ny varotra mba hanomezana ny fangatahanao.
Ahoana no hitsapana ny breaker alohan'ny fanaterana?
Ny mpanapaka hydraulic rehetra dia hanao fitsapana fiantraikany alohan'ny fivarotana.
Iza amin'ireo firenena no mamatsy ny hidrôlikao?
Ny hydraulic breakers dia amidy any amin'ny firenena 30 mahery eran'izao tontolo izao, anisan'izany i Amerika, Eoropa Aostralia, Azia atsimo atsinanana ary Afrika.
Afaka manafatra voalohany amin'ny marika manokana ve aho?
Eny, manome serivisy OEM izahay. Azonao atao ny mandefa ny logo na ny anaran'ny marika, hanamboatra azy izahay.
Misy marotoa mora vidy eny an-tsena manome antoka maharitra.Fa maninona ary ity ary azonao atolotra ahy ny tantanana toy izany?
Eny, manolotra tantanana toy izany koa izahay.Ny fiantohana lava dia gimmick mivarotra indrindra indrindra.Mazàna ireo kojakoja izay matetika tsy rava mandritra ny taona maro ihany no ahitana ny fiantohana maharitra.Ireo tantanana mora vidy sy tsy dia tsara loatra dia manome antoka ireo gimmick ireo.Ary koa ny fiantohana voafetra amin'ny vidiny ambany, maro amin'ireo marika mora kokoa no manitatra ny herin'ny kilasin'ny ft lbs amin'ny tantanana.Amin'ny ankapobeny amin'ny zavatra maro, raha mora ny vidiny dia ny kalitao!
Mampisavoritaka daholo izany.Inona no martoa ilaiko?Kilasy angovo inona no takiko? Somary misavoritaka.Inona no martoa ilaiko?Inona no kilasin'ny angovo takiko?
Lazao anay ny momba ny mpitatitra anao, ny fangatahana asa mahazatra, ny ora andrasana isan-taona ary ny teti-bolanao ary hanoro sy hametra marika sy safidy isan-karazany hofidinao izahay.
Rehefa mitanisa ahy ho an'ny tantanana ianao dia inona no matetika tafiditra ao?
Matetika izahay dia hilaza aminao ny vidin'ny fonosana izay misy: hydraulika hammer, fitaovana vaovao roa, hoses roa, brackets, pin sy kitapo, tavoahangy azota, kitapo tombo-kase, kitapo fiampangana.Hazavainay mazava tsara ny zava-drehetra amin'ny fivarotana.Tsy misy fanampiny miafina.
Nividy maritoa avy amin'ny mpivarotra iray mivarotra karazana fitaovana mifindrafindra tany aho ary tsy mahazo fanampiana na fanohanana aho izao.Inona no azoko atao?
Olana mahazatra izany.Raha tsy mahazo ny fanohanana ilainao ianao satria ny orinasan'ny mpivarotra anao dia tsy matoatoa na angamba tsy fantany ny valin'ny fanontanianao dia aza misalasala miantso anay.Tsy afaka manome antoka izahay fa afaka manampy anao, fa raha azonay atao dia hanampy anao amin'ny fomba azo atao.Tsy mampaninona anay ny taiza nividiananao ny maritoa.Raha sahirana ianao ka mila fanampiana dia antsoy izahay.Tsy mila mividy na inona na inona aminay ianao vao mahazo fanampiana avy aminay.Raha afaka manampy izahay dia hanao izany.
Manana maritoa novidiko nampiasaina tany an-kafa aho.Tsy azoko antoka hoe inona izany marika izany?Manana olana amin'izany aho, inona no azoko atao?Ahoana no ahazoako ampahany aminy?Afaka manampy ahy ve ianao?
Eny, antsoy izahay ary omeo fampahalalana betsaka araka izay azonao atao izahay.Tsy afaka mampanantena vokatra tsara foana izahay fa hanao izay tratry ny herinay hamantatra ny matoa ho anao.Alefaso mailaka aminay ny sarin'ny tantananao, miaraka amin'izay isa voatomboka eo aminy.Hanampy anay hamantatra tsara ny maritoa-nao izany.
Hidraulika Rock Breaker, Hydraulic Rock Hammer, Furukawa Hb40g, Grab fako hydraulika, Mahery Hydraulic Breaker, Multi Function Grab,